267s Ukwenza i-replica yesitsha se-lustreware sekhulu le-9 images and subtitles
Ngingu-Andrew Hazelden futhi sengibe ngumbumbi iminyaka engaphezu kwengu-30. Ngicabanga ukuthi okukhangayo nge-luster emlandweni ukuthi babedala igolide okungekho kuligolide futhi kwakucatshangwa ukuthi angama-alchemists. Uzwa sengathi ungalahleka ekubhekeni ukungaxhamli kwembiza ebilayo okwenza ukuthi ucabange ukuthi uku kwelinye izwe. I-luster inqubo lapho usebenzisa i-iron sulphides ukwakha ingaphezulu le-iridescent ebhodweni. Kuyindlela ecashile futhi eyinkimbinkimbi kakhulu. Lesi sitsha siyikhophi lesitsha se-Iraq sekhulu le-9. Empeleni ngiyisebenzisile ekwenzeni lesi isitsha sibe ubumba oluvela e-Italy kusuka eDeruta okuyi-buff color. Ngakho-ke ngithatha ibhola lobumba ngaphezulu nje kwekhilogremu enesisindo bese kuphonswa esondweni lombumbi futhi kungathatha imizuzu emihlanu ukuphonsa ijamo. Kusele izinsuku ezimbalwa ukuze isikhumba silukhuni. Uma isikukhuni, isikhumba siguquliwe nokuthi unyawo luphendukile. Lapho unyawo luphendukile, isitsha kufanele some ngokuphelele elangeni kuthi emva kwalokho kube nokudubula kwayo kokuqala okuyiwona ukudubula kwamabhisikidi khona-ke iyathathwa futhi icwengeke ibe yingilazi emhlophe ngokuyinhloko i-tin oxide ukuyenza ibe mhlophe bese iyaxoshwa futhi. Inqubo elandelayo ukupenda nge-luster pigment. Umbala engiwusebenzisa ukupenda lesi isitsha senziwa ikakhulukazi nge-sulphide yethusi kodwa futhi inesiliva kuyo futhi izokwenziwa nge-oxide ebomvu nobumba. Kuyabe sekubalwa ngakho-ke kudonselwa emazingeni okushisa akhanyayo - 650 centigrade. Ngemuva kokuba ibaliwe iyathathwa inhlabathi futhi bese ihlanganiswa neviniga kulapho-ke lapho ipendwe khona. Idizayini yamachaphaza ikopishwe kusuka kulesi isitsha se-Iraq sekhulu le-9. Eqinisweni ukuthi ungafinyelela kanjani ukuthi yikuphi amabhulashi abawasebenzisile futhi babezama ukusebenzisa ibhulashi elifanayo. Ukudubula kwe-luster kudinga i-kiln enamandla okunciphisa umoya-mpilo uzama ukudala umkhathi lapho kungekho oksijini okwehlisa izimbotshana ukukhipha isiliva nethusi. Udala intuthu Indlela engikwenzayo ngayo ukuthumela izingcezu ezincane zokhuni embobeni ngokusebenzisa umgodi wokuhlola futhi lokho kukhipha umoya-mpilo. Ngemuva kwalokho uvumela umoya-mpilo ukuba ubuye okwesikhashana ukuze usule igumbi nokuthi i-oxidation kanye nokwehlisa isikhala kubalulekile ukudala ukungaqondakali ebhodweni. Lapho ibhodwe liphuma ku-luster kiln lisabonakala ukuthi lingebumba nje embozwe ngobumba kuzofanela ukuthi ususe i-ocher off nge-abrasive. Uzokwazi-ke ukuthi ukudubula okuqhumile kusebenzile noma cha ngoba uma sesebenzile uzoqala ukubona ubomvu we-iridescent noma isiliva. Ngakho-ke yingxenye yomlingo kunazo zonke ukuxoshwa kwezimbiza ngemuva kokudutshulwa awunaso isiqiniseko sokuthi kuzokwenzekani futhi imiphumela ayibikezeli kepha yiyona nto iridescence ebonakala sengathi inokuphila kwayo uqobo. Kufanele ngesinye isikhathi ulalise imbiza ubheke ekukhanyisweni ukuze ubone ukungahambisani ngakho-ke kuya nge-angle obambe ibhodwe kuya ngokuthi ubona ukungahambi kahle noma cha. Ngakho-ke kubonakala kuyinto engaqondakali eyenzekayo
Ukwenza i-replica yesitsha se-lustreware sekhulu le-9
< start="7.76" dur="5.24"> Ngingu-Andrew Hazelden futhi sengibe ngumbumbi iminyaka engaphezu kwengu-30. >
< start="13" dur="3.96"> Ngicabanga ukuthi okukhangayo nge-luster emlandweni >
< start="16.96" dur="2.42"> ukuthi babedala igolide >
< start="19.38" dur="2.2"> okungekho kuligolide >
< start="21.58" dur="2.8"> futhi kwakucatshangwa ukuthi angama-alchemists. >
< start="24.38" dur="1.92"> Uzwa sengathi ungalahleka >
< start="26.3" dur="2.96"> ekubhekeni ukungaxhamli kwembiza ebilayo >
< start="29.26" dur="5.4"> okwenza ukuthi ucabange ukuthi uku kwelinye izwe. >
< start="34.66" dur="5.28"> I-luster inqubo lapho usebenzisa i-iron sulphides >
< start="39.94" dur="4.8"> ukwakha ingaphezulu le-iridescent ebhodweni. >
< start="44.74" dur="4.06"> Kuyindlela ecashile futhi eyinkimbinkimbi kakhulu. >
< start="48.8" dur="6.14"> Lesi sitsha siyikhophi lesitsha se-Iraq sekhulu le-9. >
< start="54.94" dur="7.92"> Empeleni ngiyisebenzisile ekwenzeni lesi isitsha sibe ubumba oluvela e-Italy kusuka eDeruta >
< start="62.86" dur="4.8"> okuyi-buff color. >
< start="67.66" dur="1.46"> Ngakho-ke ngithatha ibhola lobumba >
< start="69.12" dur="4.48"> ngaphezulu nje kwekhilogremu enesisindo bese kuphonswa esondweni lombumbi >
< start="73.6" dur="7.2"> futhi kungathatha imizuzu emihlanu ukuphonsa ijamo. >
< start="80.8" dur="4.58"> Kusele izinsuku ezimbalwa ukuze isikhumba silukhuni. >
< start="85.38" dur="4.33"> Uma isikukhuni, isikhumba siguquliwe nokuthi unyawo luphendukile. >
< start="89.71" dur="5.77"> Lapho unyawo luphendukile, isitsha kufanele some ngokuphelele elangeni >
< start="95.48" dur="5.12"> kuthi emva kwalokho kube nokudubula kwayo kokuqala okuyiwona ukudubula kwamabhisikidi >
< start="100.6" dur="4.54"> khona-ke iyathathwa futhi icwengeke ibe yingilazi emhlophe >
< start="105.14" dur="3.689"> ngokuyinhloko i-tin oxide ukuyenza ibe mhlophe >
< start="108.829" dur="3.651"> bese iyaxoshwa futhi. >
< start="112.48" dur="4.16"> Inqubo elandelayo ukupenda nge-luster pigment. >
< start="116.64" dur="7.26"> Umbala engiwusebenzisa ukupenda lesi isitsha senziwa ikakhulukazi nge-sulphide yethusi >
< start="123.9" dur="4.46"> kodwa futhi inesiliva kuyo >
< start="128.36" dur="4.86"> futhi izokwenziwa nge-oxide ebomvu nobumba. >
< start="133.22" dur="6.96"> Kuyabe sekubalwa ngakho-ke kudonselwa emazingeni okushisa akhanyayo - 650 centigrade. >
< start="140.18" dur="3"> Ngemuva kokuba ibaliwe iyathathwa inhlabathi futhi >
< start="143.18" dur="6.72"> bese ihlanganiswa neviniga kulapho-ke lapho ipendwe khona. >
< start="150.12" dur="6.06"> Idizayini yamachaphaza ikopishwe kusuka kulesi isitsha se-Iraq sekhulu le-9. >
< start="156.18" dur="4.6"> Eqinisweni ukuthi ungafinyelela kanjani ukuthi yikuphi amabhulashi abawasebenzisile futhi babezama ukusebenzisa ibhulashi elifanayo. >
< start="160.78" dur="6.15"> Ukudubula kwe-luster kudinga i-kiln enamandla okunciphisa umoya-mpilo >
< start="166.93" dur="3.59"> uzama ukudala umkhathi lapho kungekho oksijini >
< start="170.52" dur="5.68"> okwehlisa izimbotshana ukukhipha isiliva nethusi. >
< start="176.2" dur="1.46"> Udala intuthu >
< start="177.66" dur="6.96"> Indlela engikwenzayo ngayo ukuthumela izingcezu ezincane zokhuni embobeni ngokusebenzisa umgodi wokuhlola >
< start="184.62" dur="2.84"> futhi lokho kukhipha umoya-mpilo. >
< start="187.46" dur="4.68"> Ngemuva kwalokho uvumela umoya-mpilo ukuba ubuye okwesikhashana ukuze usule igumbi >
< start="192.14" dur="9.069"> nokuthi i-oxidation kanye nokwehlisa isikhala kubalulekile ukudala ukungaqondakali ebhodweni. >
< start="201.5" dur="5.129"> Lapho ibhodwe liphuma ku-luster kiln lisabonakala ukuthi lingebumba nje >
< start="206.629" dur="2.351"> embozwe ngobumba >
< start="208.98" dur="8.82"> kuzofanela ukuthi ususe i-ocher off nge-abrasive. >
< start="217.8" dur="5.4"> Uzokwazi-ke ukuthi ukudubula okuqhumile kusebenzile noma cha >
< start="223.2" dur="4.4"> ngoba uma sesebenzile uzoqala ukubona ubomvu we-iridescent noma isiliva. >
< start="227.6" dur="5.43"> Ngakho-ke yingxenye yomlingo kunazo zonke ukuxoshwa kwezimbiza ngemuva kokudutshulwa >
< start="233.03" dur="5.51"> awunaso isiqiniseko sokuthi kuzokwenzekani futhi imiphumela ayibikezeli >
< start="238.54" dur="5.6"> kepha yiyona nto iridescence ebonakala sengathi inokuphila kwayo uqobo. >
< start="244.18" dur="7.1"> Kufanele ngesinye isikhathi ulalise imbiza ubheke ekukhanyisweni ukuze ubone ukungahambisani >
< start="251.28" dur="2.819"> ngakho-ke kuya nge-angle obambe ibhodwe kuya ngokuthi >
< start="254.099" dur="2.421"> ubona ukungahambi kahle noma cha. >
< start="256.52" dur="7.42"> Ngakho-ke kubonakala kuyinto engaqondakali eyenzekayo >